'Nherera: Kutanga Kuuraya' Prequel Awana Itsva Studio seImba Yayo - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau 'Nherera: Kutanga Kuuraya' Prequel Awana Itsva Studio seImba Yayo
'Nherera: Kutanga Kuuraya' Prequel Awana Itsva Studio seImba Yayo
by Trey Hilburn III September 12, 2021 2,002 maonero
Esteri adzoka zvakare kukwira munhu wese gehena kunze. Ino nguva yakatenderedza Orphan iri kugamuchira prequel kurapwa ne Nherera: Kutanga Kuuraya. Ine firimu nyowani inouya imba nyowani yekugovera zvakare. Ino nguva kutenderera pane kuburitswa kuWarner Bros. senge yekutanga firimu, iyi firimu ichaburitswa kuParamount. Shanduko, inogona kuratidza nzira nyowani yekubudiswa kwemafirimu. Isu takaona toni yemafirimu achienda kubva kumitambo kuenda pakuburitswa pamba. Nekudaro, hazvingatishamise kana iyo bhaisikopo ichizopedzisira yaburitsa kuburikidza neParamount yekushambadzira sevhisi.
Zvakare Isabelle Fuhrman achabvisa kutaridzika kwekuve anopenga mudiki maniac nekushandisa kwese marudzi eescreen mashiripiti. Maonero ekumanikidzwa, make-up uye eprosthetics uye zvekare zvakanaka chete zvekare kuita. Kwakawanda kutaridzika uye kunzwa kwaEstere kunobva mukukwanisa kwaFuhrman kuratidza hunhu hwemwana. Mushure mezvose, arikutamba mukadzi mukuru kuita kunge mwana.
Nherera: Kutanga Kuuraya chirevo chinoenda seichi:
Leena Klammer anoronga kupukunyuka kwakajeka kubva kuchipatara cheEstonia chepfungwa uye anoenda kuAmerica achitevedzera mwanasikana akashaya wemhuri yakapfuma. Asi hupenyu hutsva hwaLeena sa "Esther" hunouya nehuso husina kutarisirwa uye hunomukomberedza naamai vanozodzivirira mhuri yavo chero zvodii.
Nherera: Yekutanga Kuuraya nyeredzi Isabelle Fuhrman naStiles vakabatanidzwa mumutambo naRossif Sutherland, Matthew Finlan naHiro Kanagawa.